Home Wararka Musuqmaasuq hakiyay laba bilood ka badan bixinta baasaboorka Soomaaliya. (Sababta Akhriso)
Dowladda Soomaaliya ayaa heshiis la gashay shirkad daabacda baasaboorada iyadoo ka baxday heshiiskii hore. Shirkadda lala galay heshiiska oo aan u diyaarsaneyn daabacaadda baasaboorka ayaa waxaa aay keentay in muddo ka badan laba bilood ee lasoo dhaafay inaan la daabicin wax baasaboor ah, waxaana kordhay tirada dadka dalbanaya baasaboor ee maalin walbaa lagu balamiyo magaalada Muqdisho, sida xogaha aan ku heleyno.
Shirkadda la siiyay qandaraaska oo ka soo dhex muuqatay muuqaal aay Villa Somalia lacago badan ku bixisay in lagu wasaqeeyo MW hore Xasan Sheekh iyo masuuliyiin kale oo ka tirsanaa dowladdii hore.
Shirkaddan oo aay leedahay haweeneey u dhalatay dalka Cumaan ayaa waxaa shirkadda la leh nin ganacsade ah oo magaciisa lagu sheegay Axmed Faarax oo ka mid ah ganacsatadii lacagaha ugu yaboohay MW Farmaajo xilligii ololaha doorashada, kaasoo aay isku jufo yihiin Farmaajo.
Xarunta Hay’adda Socdaalka & Jinsiyadaha ee ku taallo Isgoyska Shaqaalaha Subax waliba waxaa ku jarmaada dad isugu jira Hooyooyin, Dhalinyaro iyo dad waayeel ah oo raadinaya helitaanka baasaboorka.
Sawiro la qaaday ayaa muujinaya in culees badan uu ka jiro xarunta, waxaana dadka loo qabtaa balamo ay adag tahay in loo fuliyo, maadaama maalin walbaa lagu rajo geliyo inay maalita xigta heli doonaan.